Maxaan ka ognahay ninka Soomaaliga ah ee loo xiray dilka xildhibaanka UK
Sunday October 17, 2021 - 07:08:42 in Wararka by Hargeisa Head OFFICE
Ninkani oo magaciisa lagu sheegay Cali Xarbi Cali - ayaa la rumeysan yahay in uusan ku jirin liiska dadka ay diiradda ku haysay hay'adda sirdoonka Ingiriiska ee MI5.
Wuxuu ninkani ku xiran yahay imika Saldhigga Boliska ee Essex, halkaasi oo ay Su'aalo ku waydiin doonaan waaxda booliiska ee ka hortagga Argagixisada.
Ilo -wareedyo ka tirsan dowladda ayaa BBC -da u sheegay in sua'aalaha ilaa iyo imika la waydiiyay ninkan u dashay UK uu u muuqday inuu asal ahaan yahay soomaali.
Wargeysyo qaab la yaab leh caradooda u muujiyay
Xoghayaha arrimaha gudaha Britain Priti Patel ayaa sheegtay in la diyaariyay tallaabooyin lagu sugayo amniga xildhibaanada, balse waxay ku adkaysatay inay sii wadi doonaan u adeegidda dalka si carqalad la'aan ah.
"Waan sii wadi doonnaa, waxaan ku dhex nolnahay bulsho furan oo dimuqdimuqraadiyad ah," ayay tiri mar ay booqatay goobtii uu weerarku ka dhacay iyada o ay la socdaan ra'iisul Wasaare Boris Johnson, hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Sir Keir Starmer iyo afhayeenka baarlamaanka Sir Lindsay Hoyl.
"Ma jirto Shakhsi na cabsi galin kara ama dhiirigalin kara inuu naga joojiyo inaan shaqeyno, si aan ugu adeegno dimuqraadiyadda aan dooranay."
Si kastaba ha ahaatee, Tobias Elwood - oo xildhibaan ka tirsan xisbiga Muxaafidka wuxuu soo jeediyay in mudanayaashu taleefoonka kula hadlaan dadka soo doortay ama ay kulan kula qaataan aaladda Zoom-ka.
Dadka ayaa ubaxyo dhigayay goobta ay tacsida ka socoto
Baroor-diiqa loo sameeynayo Sir David oo Jimcihii la dilay ayaa wali ka sii socota deegaankii uu matalayay muddada dheer.